Thaw Zin Htun | Curiosity Science Magazine
Author Archives: Thaw Zin Htun
August 24, 2016 by Thaw Zin Htun2Comments
Relativity နှင့်ပတ်သတ်ပြီးဖတ်လိုပါက https://curiositymm.com/2016/08/12/%E1%80%A1%E1%80%81%E1%80%BA%E1%80%AD%E1%80%94%E1%80%B9-%E1%80%9F%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%80%9C%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%80%BB%E1%80%95%E1%80%84%E1%80%B9-%E1%80%9E%E1%80%AD%E1%80%AF/ https://curiositymm.com/2016/08/14/%E1%80%A1%E1%80%81%E1%80%BA%E1%80%AD%E1%80%94%E1%80%B9-%E1%80%9F%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%80%9C%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%80%BB%E1%80%95%E1%80%84%E1%80%B9-%E1%80%9E%E1%80%AD%E1%80%AF-2/ တို့မှာဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ် ။ အရင် ဆောင်းပါးမှာ တုန်းကျွန်တော်နဲ့တူတူအချိန်-ဟင်းလင်းပြင်ထဲမှာခရီးထွက်ပြီး the Theories of Special and General Relativity(အထူးနှင့်ယေဘုယျနှိုင်းယျသီအိုရီ)ကိုလေ့လာခဲ့ကြတယ်။ ခုတော့ အက်တမ်အောက်အမှုန်လေးများ ရဲ့ကမ္ဘာကြီးဆီကို ကျွန်တော်နဲ့ တူတူသွားကြရအောင်လား? ဒီမှာကျွန်တော်တစ်ခုပြောလိုတာကတော့ Quantum ဟာ ရီလေတီဗတီထက်အများကြီးပိုရှုပ်သယောင်ရှိပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ Quantum Level မှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေဟာ ကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်ကြုံတွေ့နေရဖြစ်ပျက်နေတာတွေနဲ့ တခြားစီကိုဖြစ်နေပါတယ်။ […]
August 15, 2016 by Thaw Zin Htun Leaveacomment
ကျွန်တော် ရီလေတီဗတီသီအိုရီ နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး အရင်တစ်ပတ်က “အချိန်-ဟင်းလင်းပြင် (သို့ မဟုတ်) ရီလေတီဗတီသို့ ခြေလှမ်း စတင်ခြင်း” ဆိုတဲ့အမည် နဲ့ ဆောင်းပါးရှည်တစ်ပုဒ်ရေးသားခဲ့ပါတယ် ။ အဲ့ဒီဆောင်းပါး ဖတ်ပြီးတဲ့အခါမှာ သူငယ်ချင်းတွေကကော ၊ စာဖတ်သူတွေက ပါ ဆောင်းပါးနဲ့ ပတ်သတ်ပြီးမေးခွန်းတွေ မေးကြပါတယ် ။ အဲ့ဒီမေးခွန်းတွေကို စုထားပြီးတော့ ကျွန်တော် အခု လ […]
အချိန်-ဟင်းလင်းပြင် (သို့ မဟုတ်) ရီလေတီဗတီ သို့ခြေလှမ်းစတင်ခြင်း – အပိုင်း (၂)
August 14, 2016 by Thaw Zin Htun
အပိုင်း (၁) ကို အောက်ပါ Link မှာ ဖတ်ရှု နိုင်ပါတယ် ။ https://curiositymm.com/2016/08/12/%E1%80%A1%E1%80%81%E1%80%BA%E1%80%AD%E1%80%94%E1%80%B9-%E1%80%9F%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%80%9C%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%80%BB%E1%80%95%E1%80%84%E1%80%B9-%E1%80%9E%E1%80%AD%E1%80%AF/ အထူးရီလေတီဗတီသီအိုရီ (The Special Theory of Relativity) အထူး ရီလေတီဗတီ သီအိုရီ (Special Relativity Theory) ရဲ့အဓိက အခြေခံအချက်နှစ်ချက်ကတော့ (၁) ရူပဗေဒ ရဲ့ နိယာမတွေ […]
Featuredby Thaw Zin Htun Leaveacomment
၂၀၁၄ ခုနှစ် နှစ်ကုန်ပိုင်း တုန်း က အရမ်း ကို ရေပန်းစားနေတဲ့ Interstellar ဆိုတဲ့ Christopher Nolan လက်စွမ်းပြထားတဲ့ ကား မှာ အဓိက အခြေခံထားတဲ့အချိန်ဟာနှိုင်းရပဲဆိုတဲ့သဘောတရားကို သတိထားမိကြမယ်ထင်ပါတယ် ။ အဲ့ဒီဟာ ရီလေတီဗတီ သီအိုရီ ကိုအခြေခံထားတာပါ ။ အဲ့ဒီရီလေတီဗတီဆိုတာဘာလဲ ? အချိန်ဆိုတာဘာလဲ ? သူ က […]
April 27, 2015 by Thaw Zin Htun 1 Comment
ခင်ဗျားပတ်ဝန်းကျင်ကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ပါ။ ဘာတွေ မြင်ရသလဲ။ ခင်ဗျားပတ်လည်မှာ အရာဝတ္ထု တွေအများကြီး ။ အဲ့တာတွေအကုန်ခင်ဗျားဘာလို့ မြင်ရလဲ။ အလင်းရှိလို့ ပေါ့ ၊ မဟုတ်ဘူးလား။ အလင်းနဲ့ ကျွန်တော်တို့ အကုန်ရင်းနှီးပါတယ် ။ ငယ်ငယ်ကထဲက အလင်းပြန်ခြင်း ၊ အလင်းယိုင်ခြင်း အစရှိတာတွေဟာ အပ်ကြောင်းထပ်လောက်အောင် သင်နေရတဲ့အကြောင်းတွေပါ ။ ဒါပေမဲ့အလင်းဟာ ဒီလောက်ပဲလား ? ကျွန်တော်တို့ အတွက် […]